पत्रकारीता के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने ? – NepaliEkta
10 October 2020 Nepaliekta	0 Comments
वर्तमान समयमा “पत्रकारिता” शब्द हाम्रो लागि नयाँ शब्द होइन । हामीलाई बिहान सबेरै चाँडो अखबार चाहिन्छ, त्यसपछि हामीले दिनभरि रेडियो, दूरदर्शन, इन्टरनेट र सोशल मिडिया मार्फत समाचारहरू पाउँछौं । उही समयमा, रेडियो, टिभी र सोशल मिडियाले हामीलाई हाम्रा व्यक्तिहरू बाहेक बिहानदेखि बेलुकासम्म अन्य धेरै जानकारीहरूसँग परिचित गराउँदछ ।
यसको साथ, विज्ञापनले हामीलाई उपभोक्ता संस्कृतिसँग जोडेको छ । समग्रमा, पत्रकारिताका विभिन्न माध्यमहरू जस्तै समाचार पत्र, म्यागजिन, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, सोशल मिडियाले सम्पूर्ण विश्वलाई एक समूहदेखि अर्को देशमा एकताबद्ध गरेको छ । परिणामस्वरूप आज पत्रकारिताले राष्ट्रिय तहको सोंच, अर्थ, राजनीति र संस्कृतिलाई पनि प्रभाव पार्न सकेको छ ।
हामीले आफ्नो दैनिक जीवनको अवस्थाको बारेमा केही सोंच्दा वा कुनै दुई जना व्यक्तिहरु भेट हुँदा वा कहिले काहीं एकअर्काको घर भेट्हुँदा एक आपसमा कुरा गर्दा, उनीहरूको पहिलो हुन्छ कस्तो छ ?, तपाईलाई कस्तो छ ? वा हाल खबर के छ ? भनि बुझ्ने कोशिस गर्दछौं । यो दैनिक रुपम भेट हुने साथी वा आफन्तलाई पनि यस्तैं साधारण प्रश्नहरू गरिन्छ ।
तर यदि हामीले यसलाई थोरै विचार गर्यौं भने यी प्रश्नहरुमा कोहीले एउटा इच्छा वा जिज्ञासा देखाउँदछ र त्यो नयाँ र ताजा समाचारहरू जान्न खोजेको बुझिन्छ । तिनीहरू परिवर्तनहरू वा पछिल्लो केही घण्टा वा अन्तिम रातको बीचमा भर्खरको परिवर्तनहरू बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यसको मतलब यो हो कि हामी हाम्रा साथीहरू, छिमेकीहरू, आफन्तहरू र सहकर्मीहरूबाट वरपरका घटनाहरूको बारेमा जान्न चाहन्छौं ।
मानवीय वृत्ति त्यो हो कि, उसले चीजहरू, घटनाहरू र वरपरका व्यक्तिहरूको बारेमा अद्यावधिक जानकारी राख्न चाहन्छ । जिज्ञासाको भावना मानवमा व्याप्त छ । यही जिज्ञासालाई नै खास अर्थमा समाचार र पत्रकारिताको मूल श्रोत मान्न सकिन्छ । यदि त्यहाँ कुनै उत्सुकता छैन, त्यहाँ समाचारको आवश्यक देखिंदैन । तत्थ्यपरक घटना छैन भने त्यो पत्रकार र पत्रकारीताको यो जिज्ञासा बन्न सक्दैन ।
यस जिज्ञासाको कारण, हामी हाम्रो छिमेक, शहर, देश र संसारको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्छौं । यी जानकारीले हाम्रो दैनिक जीवनका साथै सम्पूर्ण समाजलाई असर गर्दछ । यी सूचनाहरूले हामीलाई पछि के हुन्छ निर्णय लिन मद्दत गर्दछ । यही कारण हो कि आधुनिक समाजमा सूचना र सञ्चार माध्यमको महत्व बढेको छ । आज हामी समाचारको माध्यमबाट देशमा के भइरहेको छ भन्ने बारे अधिक जानकारी प्राप्त गर्छौं ।
संसारभरका समाचारहरू विभिन्न मिडियामार्फत हाम्रो घरहरूमा पुग्दछ, चाहे त्यो अखबार होस् वा टेलिभिजन, रेडियो वा इन्टरनेट वा सोशल मिडिया । समाचार संस्थामा काम गरिरहेका पत्रकारहरूले देश र विश्वमा भइरहेका घटनाहरूलाई समाचारमा रूपान्तरण गरेर हामीलाई सम्प्रेषण गर्दछन् । यसको लागि पत्रकारहरूले दैनिक जानकारी संकलन गर्छन् र समाचारको ढाँचामा प्रस्तुत गर्दछन् । यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई “पत्रकारिता” भनिन्छ ।
व्यक्ति, समाज, देश र विश्वलाई असर गर्ने प्रत्येक जानकारी भनेको समाचार हो । त्यो हो, एक घटनाको रिपोर्ट समाचार हो । छोटकरीमा भन्नु पर्दा समाचार हतारमा लेखिएको ईतिहास हो ।
“पत्रकारिता” शब्दको अर्थ “जर्नल” बाट बनेको छ जसको अर्थ हो र यसको अर्थ “दैनिक”, “नाई नादिनी”, “रोजना” भनेको दैनिक क्रियाकलापहरूको विवरण हो । आज शब्द जर्नल “पत्रिका”, “अखबार”, “दैनिक अखबार” को प्रतीक भएको छ । पत्रकारिता भनेको समाचार पत्र, पत्रिका सम्बन्धित व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, सम्पादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण, इत्यादि हो । आजको युगमा पत्रकारिताका धेरै माध्यमहरू छन् । जस्तै अखबार, म्यागजिन, रेडियो, टेलिविजन, वेब–पत्रकारिता, सोशल मिडिया, इन्टरनेट आदि ।
यो “पत्र” बाट “पत्रकार” र त्यसपछि “पत्रकारिता” लाई बुझ्न सकिन्छ । ठूलो हिन्दी शब्दकोश अनुसार “अक्षर” भनेको चिठ्ठी, कागज, कागज जसमा कुनै चीज लेखिएको छ वा छापिएको छ । कागज वा धातु पट्टी जसमा एक प्रामाणिक लेख लेखिएको छ वा व्यवहारको बारेमा कुँदिएको छ (दान, तामाको पाना), कुनै पनि व्यवहार वा घटनाको प्रमाण लेख (लीज, कागजात), वाहन, सवारी, अखबार, अखबार हो । “पत्रकार” भनेको एक अखबारको सम्पादक वा लेखक हो र “पत्रकारिता” भनेको पत्रकारको काम, समाचार सिक्ने, समाचार भेला गर्ने आदि हो ।
शब्दकोशमा यो स्पष्ट छ कि पत्रको अर्थ कागज वा उपकरण हो जुन चीज लेखिएको वा छापिएको छ जुन प्रामाणिक छ, जसले घटनाको विषयको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ र पत्रकारको अर्थ त्यो पत्र हो, कागज लेखक, सम्पादक र पत्रकारिता भनेको यसको प्रवचन हो ।
यो उल्लेखनीय छ कि यी सबै माध्यमहरू मार्फत जानकारीको विस्थापन वा प्रसार एकतर्फी हो। जानकारी प्राप्तकर्ताबाट तिनीहरूको प्रतिक्रिया शून्य छ। त्यो हो, सबै माध्यमहरूमा, प्रचारक वा प्रसारकको सन्देश प्राप्तकर्तासँग सही सम्पर्क स्थापित गर्न सक्षम छैन। प्राप्तकर्ताबाट पठाइएको प्रतिक्रिया, पत्रहरू आदि द्वारा, शून्य छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा सार्वजनिक संचारको अत्याधिक विधिहरूको अभ्यास उजागर हुन थालेको छ ।
एक घटनाको रिपोर्ट तथा समाचारले व्यक्ति, समाज र विश्वलाई असर गर्दछ, त्यो समाचार हो । थप रूपमा भन्नु पर्दा घटनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध छ । यो पत्रिका सञ्चालन कर्मसँग सम्बन्धित परिभाषित रहन्छ । पत्रकारिताको प्रकृति बुझ्न, केहि महत्वपूर्ण परिभाषा भनेर उल्लेख गरिन्छ ।
← क्यान्सर विरुद्ध सर्भाइबर मिट–२०२० सम्पन्न
पार्टीका पत्रकारहरु अन्य पत्रकार भन्दा वेग्लै हुनुपर्दछ : सिंह →
नागरिकहरुप्रति उदासिन सरकार
18 April 2020 18 April 2020 Nepaliekta 0
969 जनाले पढ्नु भयो । काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको माग राख्दै नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) सहितका
172488 जनाले पढ्नु भयो । काठमाडौं । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले स्थगित विभिन्न तहका परीक्षा भदौ दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने जनाएको
3179 जनाले पढ्नु भयो । काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दसैँ भत्ता मात्रै होइन, अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि सरकारले
1532 जनाले पढ्नु भयो । पुँजीवादी ब्यावस्थाको यस्तो छ वरै चरीत्र । अति विभेद देख्दा पो पीडा हुन्छ मन भित्र
1006 जनाले पढ्नु भयो । जिल्ला दाङ, बंगलाचुली गाउँपालीका ३ कमेरे चौर निवासी इश्वरी प्रसाद कामीकी श्रीमती वर्ष २६ की